Accueil > Gazetin'ny nosy > Fifidianana: Mila olona ankatoavin’ny rehetra ny fikarakarana
Fikarakarana fifidianana ihany, ary tsy misy afa-tsy izay no vahaolana tokana ahafahan’i Madagasikara miala amin’izao krizy efa mandrangaranga izao. Ny fametrahana fitondrana hanatanteraka io fifidianana madio sy mangarahara eken’ny rehetra io amin’izao no mbola miteraka olana, iza no hitarika azy? Rahoviana no anatanterahana izany ?…
Raha ny loharanom-baovao voaray, efa mandeha amin’izao fotoana izao ny fanaovana sivana mikasika ny olona hitarika ny fitondrana manokana hikarakara ny fifidianana eto amintsika. Araka ny vaovao voaray hatrany, olona tsy mikasa sady tsy manan-tsaina hilatsaka ho fidiana filoham-pirenena mihitsy no apetraka eo amin’io toerana io, izay handrafitra ny governemanta teknisianina. Ny fampiodinan-draharaha ihany no ho ataony amin’izany hatrany amin’ny fahavitan’ny fifidianana.
Raha ny vaovao voaray hatrany, efa nahazo fankatoavana tamin’ny olona maro, indrindra fa ireo voakasika mivantana amin’izao olana izao, io kisarisary fivoahana amin’ny krizy io.
Manoloana izany, efa misy ny sivana manokana napetraka amin’ny fisafidianana io olona natao hitondra ny firenena mandritra ny fotoana voafetra io. Raha ny voalaza dia olona tsy ao anatiny saingy tsy manana olana amin’ireo antoko pôlitika rehetra misy eto amin’ny tany sy ny fanjakana io olona natao hitondra io. Ity singa iray ity izay ahafahana manilika ireo mpanararaotra ny olana ara-pôlitika mba hitadiavana seza.
Mpitsara…. Vehivavy ?
Arak’izany, olona sady tsy mpanohana no tsy mpanohitra no mendrika io toerana io. Tao anatin’izay fotoana rehetra izay, efa nisy ny fihainoana ireo olona mendrika an’izany nataon’ireo vondrona iraisam-pirenena hanaovana fanadihadiana manokana. Raha ny fantatra, vehivavy iray mpitsara, no fantatra fa tsara toerana indrindra amin’izao, eo ny fahitsiany sy ny tsy fitanilany, ny fahaizany sy ny fahalalany na amin’ny sehatra anatiny izany na amin’ny iraisam-pirenena.
Arak’izany, tsy misy toerana ho an’ny mpanao pôlitika ao anatin’io governemanta vaovao io ary tsy misy toerana ho an’ireo dinaozaoro mpitady tombontsoa fotsiny. Ny tanjona dia ny hametrahana ireo mpilatsaka ho fidiana filoham-pirenena rehetra amin’ny toerana mitovy, tsy misy fitanilana.
Ny loharanom-baovao ihany no nahalalana fa io kisarisary io no hany tokana azo antoka fa hanatanteraka fifidianana eken’ny rehetra sy hankatoavin’izao tontolo izao. Izay no heverina fa mahatonga ny fironan’ny rehetra ho an’ny amin’ny olona mahalala tsara ny lalàna sy ny fanajana izany.